MOFON’AINA ALAKAMISY 27 DESAMBRA 2018 – Athis Fanantenana
MOFON’AINA ALAKAMISY 27 DESAMBRA 2018
27 desambra 2018
9 Aoka ny fitiavana ho amin’ ny tsi-fihatsarambelatsihy; mankahalà ny ratsy; mifikira amin’ ny tsara.10 Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ ny mpirahalahy; mitariha làlana amin’ ny fifanomezam-boninahitra.11 Mazotoa, fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ ny fanompoana ny Tompo.12 Mifalia amin’ ny fanantenana; miareta amin’ ny fahoriana; mahareta amin’ ny fivavahana.13 Miantrà ny olona masina araka izay ilainy; mazotoa mampiantrano vahiny.
ROMANA 12 : 9-13
MAHAIZA MIFALY NOHO NY FANANTENANA
1- Ny olona manana fanantenana dia mitraka
« Mifalia amin’ny fanantenana » (and. 12). Ny fanantenana ao amin’ny mpino no mitarika azy hifaly. Ny fanantenana dia vokatry ny finoana sy fahatokiana ary faharesen-dahatra fa hanatanteraka ny teny fíkasana sy fanomezan-toky nambarany tamintsika nv Tompo. Tsy kobaka am-bava ny Tompo fa hotanterahinv izay nolazainy, koa mitrakà, aza manjoretra, na manjonitra fa mifalia ! Ny teny nolazain’ny Tompo no inoantsika. ary ny finoana no mitondra fanantenana. Koa mifalia fa izay teny nomen’ny Tompo anao tamin’izao krismasy izao dia ho tanterahiny tokoa. noho ny fitiavany anao.
2- Ny olona manana fanantenana dia miaritra
« Miareta amin’ny fahoriana » Nahoana àry no asina mifaly nefa asaina miaritra fahoriana ? Satria ny fanantenana dia mitarika antsika ahita lafiny miabo tsara, ary fiainana. Tsy maintsy mandalo fahoriana tahaka an’i Kristy ny Mpino : kanefa handalo izany fa fandresena toy ny nitsanganan’ny Tompo tamin’ny maty no ihavin’ny fanantenana. Koa mifalia na dia miaritra fahoriana aza fa lalana tsy maintsy lalovana vetivety izany.
3 – Ny olona manana fanantenana dia maharitra
«Mahareta amin’ny fivavahana ». Ny dika sy hevitry ny « manantena » dia ny tenv hoe : « miandry ». Ny olona miandry dia tsv maintsy maharitra sy miaritra. Tsy miainana amin’ny fanantenana izay maimaika sy dodona tsy mahandry tantana. lo faharetana io dia asehoy amin’nv fivavahana. Mivavaha mandra-piposaky ny fanantenana fa tsy maintsy ho avy izany.
Moa azonao hazavaina indray ve ny fifandraisan’ny fifaliana noho ny fanantenana sy ny fiaretana fahoriana?
MOFON'AINA ALAKAMISY 20…
MOFON'AINA ZOMA 28…